धेरै मानिसहरू clementine के हो सोध्न। आज हामी मात्र यो प्रश्नको जवाफ प्रयास गर्नुहोस्, तर हामी गुण र फल को गरमी सामाग्री कुरा गर्नेछौं।
Clementine के हो?
Clementine एक सुन्तले रङ र सुन्तला को एक संकर हुन मानिन्छ। फल को नाम एक व्यक्ति Clement मा ब्रीडर र पुजारी बाट प्राप्त भयो। पहिलो, उहाँले अल्जेरिया मा प्रारम्भिक 20 औं शताब्दीमा यो फल ल्याए।
बाह्य, Clementine मन्डारिन फरक छैन। मात्र फरक पूर्व अझ तीव्र छ कि छ सुन्तला रंग। सबैभन्दा उच्चारण मीठो स्वाद र धनी सुगन्ध संग फल - स्वाद गुणहरू, को clementine लागि जाँदा।
Clementine कहाँ बढ्छ?
यो हाइब्रिड एक बाक्लो संग उच्च बढ्छ रूखहरू चदंवा स्पेन, मोरक्को, अल्जेरिया, इटाली र टर्की: (5-6 मीटर सम्म) भूमध्य देशहरूमा। किनभने लगातार र धेरै रमाइलो सुगन्ध को अक्सर पात चिया थपिएका छन्। तिनीहरूले समाप्त मा बताएको छ, एक oblong आकार छ। सानो शाखा नजिकै thorns छ।
Clementine के हो र यो कसरी mandarins भिन्न? संग तुलना अन्तिम clementine थप तुसारो गर्न प्रतिरोधी छ र बाली धेरै पहिले सक्षम बनाउँछ। फल को बोक्रा तंग को मज्जा गर्न, धेरै पातलो छ। नियम, छुट्टी मौसममा उच्च मांग मा अक्टोबर-फेब्रुअरी देखिन्छ, र यसरी रूस Clementine मा स्टोर को समतल मा।
clementine को प्रकार
फल निम्न प्रकार:
कोर्सिकाली। सुन्तला यस प्रकारको एक शाही हुन मानिन्छ। यस्तो फल पूर्ण अनुपस्थित हड्डी छन्, र तिनीहरू सबै अन्य mandarins भन्दा उज्ज्वल स्वाद छ। कोर्सिकाली clementines नोभेम्बर र फेब्रुअरी हाम्रो देश को बजार मा, र आफ्नो धनी रातो रंग द्वारा प्रतिष्ठित छन्। मुख्य विशिष्ठ सुविधा - पात एक शाखा मा फल को बिक्री।
स्पेनी। यो हाइब्रिड 10 बीउ छ। यो ठूलो र सानो दुवै हुन सक्छ। स्पेनी clementines आफ्नै उप छ।
मोन्ट्रियल। Clementines छोडपत्र यस प्रकारको सामान्यतया अल्जेरिया वा स्पेन, धेरै दुर्लभ छ। औसत फल को आकार मा पहिलो दुई प्रकार तुलनामा बीउ को उच्चतम संख्या छ। रूस मोन्ट्रियल Clementine पहिले नै अक्टोबर को महिना मा आयात।
हामी पहिले देखि नै यस्तो clementine कि देखेको छ। अब यो उपयोगी गुण के छ, के यसको ताप सामग्री हो कुरा गरौं।
तसर्थ, यस संकर भिटामिन (सी, ई र समूह बी) मा त धनी छ र तत्व (जस्ता मैंगनीज, सेलेनियम, म्याग्नेसियम, पहिल्याउन सोडियम, फस्फोरस, पोटासियम, क्याल्सियम, फलाम, तामा) लामो अवधि प्रशासन वस्तुतः सक्षम फल को दिइएको मात्रा जीवनको लागि आवश्यक पदार्थ आफ्नो शरीर Replenish।
यो कुनै गोप्य भन्ने सबैभन्दा को एक कम क्यालोरी फल मानिन्छ tangerines। Clementines, तिनीहरूले पनि समावेश गर्नुहोस्। तिनीहरूले 48 क्यालोरी भन्दा कुनै समावेश गर्दछ। त्यसैले यी फल आहार समयमा वा टोन को मर्मतका लागि खपत।
जो पाचन समस्या र गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पर्चा छ ती सिफारिस कारण उपयोगी खनिज र भिटामिन clementines को सामग्री। साथै, फल सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ , शरीर गरेको चयापचय प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन, साथै भोक वृद्धि गर्न।
mandarins को कुनै पनि प्रकारको संग, clementines कपाल र छाला को नवीकरण गर्न योगदान। तिनीहरूलाई रोक्न मद्दत गर्छ देखि सिट्रस फल यस प्रकारको दृष्टि र ताजा निचोडा रस सुधार कि टिप्पण लायक छ सर्दी (तीव्र श्वसन रोग र इन्फ्लूएंजा)।
अक्सर clementine आवश्यक तेल निराशा र अनिद्रा लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय रूपमा प्रयोग गरिएको छ। साथै, यो कस्मेटिक्स प्रयोग गरिएको छ। यो फल को तेल warts, सेल्युलाईट, मुखासे, scars र खण्डका चिह्न को छुटकारा प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ, छाला जवान राख्न अब को लागि अनुमति दिन्छ।
clementine प्रयोग गर्न Contraindications
tangerines (लगभग सबै आफ्नो किसिमहरु) को रूपमा, Clementine धेरै उपयोगी गुण छ, तर यो पनि मानव स्वास्थ्य को लागि हानिकारक हुन सक्छ। हामीलाई यी अवस्थामा विचार गरौं।
सबै को पहिलो, सबैलाई कि सिट्रस फल धेरै खान सक्दैन मा बुझ्नुपर्छ। अन्यथा एलर्जी प्रतिक्रिया को घटना को एक उच्च सम्भावना छ। यो पनि gastritis, enteritis, nephritis, cholecystitis, पेट अल्सर र संबंधी बृहदांत्रशोथ ग्रस्त गर्नेहरूका लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न होसियार हुनुपर्छ। त्यहाँ तिनीहरूले मात्र एक डाक्टर सिफारिस गर्नेछ जो राशि मा हुन छ।
साथै, सबै प्रशंसक जान्नु आवश्यक aromamasel: छाला को लागि एक मइस्चराइजिंग एजेन्ट रूपमा clementine तेल प्रयोग गरेर पछि, कुनै पनि मामला मा 1 घण्टा sunbathe गर्न सक्दैन। यो तेल phototoxic छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। र cautiously उपकरण तपाईं (विशेष गरी गर्भावस्था को पहिलो तीन महिनामा) expectant आमा व्यवहार गर्न आवश्यक छ।
clementine के व्यञ्जन तयार गर्न सकिन्छ?
Clementine - लगभग कुनै पनि पेस्ट्री, मिठाईहरू, केही सलाद र नाश्ता थप गर्न सकिन्छ कि एक फल। यहाँ मुख्य घटक जो यस फल को नाम हो एउटा उदाहरण पकवान "चकलेट संग सलाद clementines" छ।
यसलाई बनाउनको लागि, तपाईंलाई आवश्यक: बादाम गुच्छे को एक मुट्ठी, 5-6 कला। चीनी को चम्मच, 100 GR। गाढा चकलेट (गाढा वा दूध - एक अवैतनिक), clementines को 8 टुक्रा, ताजा टंकशाला, 4-5 कला। पानी चमचा, एक सानो वेनिला।
बोक्रा सिट्रस फल, बीउ हटाउन र crosswise फल कटौती। को टकसाल पात टुकडे करो, को बादाम काट्नु। कटा clementines धेरै प्लेट राख्नु र टकसाल र अखरोट संग छिडकना। त्यसपछि फोडा गर्न पानी ल्याउन, यो चीनी र वेनिला vsypte। को सिरप प्राप्त गर्न, एक सानो बिट जोश। तिनीहरूले फल एक प्लेट मा हामी राखे छिडकना। यो चकलेट संग छर्कनु बाँकी। यो सलाद यसलाई आफ्नो परिवार रमाइलो गर्न निश्चित छ, धेरै स्वस्थ र स्वादिष्ट छ।
clementines के पेय तयार गर्न सकिन्छ?
अक्सर रक्सी लागि सुन्तले रङ र सुन्तला को एक संकर प्रयोग गर्नुहोस्। यो पेय को नाम फरक हुन सक्छ, तर नुस्खा लगभग एउटै छ।
clementines देखि छिटो रक्सी तयार गर्न, यस्तो clementines (लगभग 1 किलो), वोदका वा उमालेर बनाउनु (500 एमएल), चिनी (300 ग्राम) को रूपमा उत्पादनहरु सुरक्षित हुन।
छील तिनीहरूलाई हटाउने बिना फल, भोकमरी र स्लाइस मा कटौती धुन। एक ग्लास जार मा कटा clementines ठाँउ वोदका थप्न र प्लास्टिक ढक्कन बन्द गर्नुहोस्। रक्सी कोठा तापमान मा एक गाढा ठाउँमा कम्तिमा दुई दिन जिद्दी गर्न आवश्यक छ। उहाँले जलसेक पछि, कम गर्मी मा राख्नु चीनी, थप्न एक फोडा गर्न प्रणालीबद्ध को फोम हटाउने, ल्याउन 7-8 मिनेट को लागि जोश। Refrigerate रक्सी र एक धेरै राम्रो strainer वा cheesecloth मार्फत यो फाटो। कि पछि, बोतल मा खन्याउन र रेफ्रिजरेटर मा भण्डारण गर्नुहोस्।
के हो Clementine? यो Housewives लागि एक godsend! यो फल मात्र होइन उपयोगी तर पनि धेरै स्वादिष्ट छ कि बाहिर जान्छ। यसलाई तपाईंले अद्भुत भोजन र पेय पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ।
Coreopsis लामो - बगैचा सजावट
पीलिया: कारणहरू र लक्षण
क्यासिनो "खजाना द्वीप": समीक्षा, बोनस समीक्षा
प्रोटोन पम्प inhibitors: लागूऔषधको सूची, कार्य को संयन्त्र, समीक्षा
एक बुना भयो उत्पादन र चीजहरु को कपडे को स्टार्च कसरि? हामी प्रभावकारी तरिकाहरू अध्ययन गर्छौं
कसरी घर मा आफ्नो दाँत सेतो गर्न?
बुल्गारिया, "कमचिया" एसोक: बाकी गोल्डन रेण्ड मा
पशु र बच्चाहरु। पाल्तु जनावर र बच्चा को विकास मा आफ्नो महत्त्व